Kacdoonka “Anti Trump”: Barlamaanka UK oo ka doodi doona booqashada Donald Trump – Kasmo Newspaper
Kacdoonka “Anti Trump”: Barlamaanka UK oo ka doodi doona booqashada Donald Trump
Updated - January 31, 2017 9:50 pm GMT
Codsi si wadajir ah loo saxiixay (Petition) oo looga soo horjeedo in Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump soo galo Britain ayaa u gudbay Barlamaanka, ka dib markii uu ka gudbay tiradii loo baahnaa.
Codsiga waxaa la bilaabay ka hor intii Ra’iisal wasaare Theresa May ayan u fidin Madaxweynaha, casuumaadda rasmiga ah, Jimcihii, 27kii Jenaayo, laakiin wuxuu sii xoogaystay markii uu soo baxay amrkii lagu joojhinayay soo-galootiga.
Hab-maamuuska (Protocoll) ayaa qaba in madaxda booqashada rasmiga ah ku soo gaarta dalka in ay la casheeyaan Boqoradda Elizabeth, taas oo xaaladda Trump ku abuuri karta wajigabax Dibolomaasiyadeed. Qalalaasihii ka dhashay wareegtadii dhowaan Madaxweyne Trump ku joojiyay soo-galootiga, gaar ahaan 7da dal ee Islaamka waxay ka dhalisay caalamka daafihiisa, iyo gudaha Maraykankaba kacdoon dadweyne.
Dalkan Britain, gaar ahaan, waxay ku keenaysaa culays dheeraad ah, xilli Xukuumadda Muxaafidka ah iyo guud ahaan dalkuba la tacaalayo furdaaminta ka bixitaanka Midowga Yurub.
Dhanka kale waxaa dalkaan ka jira caado xeer ah oo codsi dadweyne oo hela saxiixa ilaa 100,000 oo qofood in loo gudbinayo Barlamaanka, si Xildhibaannadu uga doodaan.
Ma aha markii 1aad oo codsi midkaan la mid ah laga keeno Donald Trump, waxaana ka horreeyay mid bilowgii Disembar 2015kii laga keenay, markii uu bilaabay in uu dadka Muslimka ah ugu hanjabo in uu dalka ka mamnuuci doono haddii loo doorto xilka Madaxweynaha.
Theresa May oo xilligaas ahayd Wasiirka Arrimaha Gudaha, iyada oo ka jawaabaysa guuxa dadweynaha Britain ereyadeedii waxaa ka mid ahaa: “Soo gelitaanka UK ma ahan xaq ee waa hadiyad, waxaanan adeegsan doonaa awooddeyda si aan uga horjoogsado kuwa bulshadeenna dhibaya oo aan nala qaybsananyn waxa aan qiimayno”.
In kasta oo an wakhti loo qaban wali,Xukuumadda May ayaa ku adkaysanaysa in martiqaadka loo fidiyay Donald Trump sidiisii u tagnaan doono, iyada oo xubno ka tirsan xisbigeeda ku dhaliilayaan in ay ku fududaatay go’aanka casumaadda.
Galinkii dambe ee maantana, Xoghayaha Arrimaha Gudaha Britain Amber Rudd ayaa guddi Barlamaanka ah hortooda ka sheegtay in go’aanka Madaxweyne Trump ee joojinta soo-galootiga yahay mid wax kala qaybinaya oo waxtar u leh kooxaha argagixisada oo qur ah.
Laakiin codsiga oo sare u dhaafay I,6 malyuun oo qofood, walina sii socda, wuxuu hadda galay Ajendaha doodda Barlamaanka, waxaana loo qabtay 20ka Febrayo in dooddiisa la galo, ka dib markii Guddiga Codsiyadu Aqalka u gudbiyeen.
Akhri sheekooyin la xiriira
UK: Xukuumadda oo ka jawaabtay codsigii Trump lagu horjoogsaday
Codsi ‘DonaldTrump’ ka horjoogsanaya in uu soo galo UK